Guddoomiyaha Fulinta ee Sandals® Resorts ayaa loo aqoonsaday inuu yahay Hoggaamiyaha Marti -gelinta Caalamiga ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hotelada & Dalxiiska Wararka » Guddoomiyaha Fulinta ee Sandals® Resorts ayaa loo aqoonsaday inuu yahay Hoggaamiyaha Marti -gelinta Caalamiga ah
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • News • Dadka • jiga • Wakhtiga waarta • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
Adam Stewart wuxuu ku biirayaa Guddiga Fulinta ee WTTC
Guddoomiyaha Fulinta ee Sandals Resorts, Adam Stewart, ayaa si rasmi ah loogu casuumay inuu ka mid noqdo Guddiga Fulinta ee Golaha Socdaalka & Dalxiiska Adduunka (WTTC). Soo -kicinta ayaa ka dhigan isbeddelka wax -qabadka leh iyo horusocodka uu Stewart sameeyay muddadii uu ku jiray warshadda.
WTTC waxay u taagan tahay waaxda gaarka loo leeyahay ee Safarka & Dalxiiska oo ay xubno ka yihiin 200 agaasime guud, Kuraas, iyo Madaxweynayaal.
Aadam wuxuu la imanayaa khibrad aad u badan isagoo si dhow ula shaqeeyay aabbihii dhintay si uu u dhiso waxa hadda jira, oo ah mid ka mid ah sumcadaha ugu caansan warshadahayaga.
Stewart wuxuu ballanqaaday inuu sii wadi doono dhiirrigelinta warshad ka sii waarta oo loo dhan yahay sidii shalay ahayd.
"Sharaf bay ii tahay inaan ku biiro Guddiga Fulinta ee urur aan aad u ixtiraamay tan iyo bilowgii xirfadayda," ayay tiri Aadan Stewart, Gudoomiyaha Fulinta ee Sandals Resorts Dhammaan loo dhan yahay, “Kooxdan hoggaanka ahi waxay si xamaasad leh diiradda u saaraysaa dadaallada qaybta socdaalka iyo dalxiiska, waxaanan aad u xiiseynayaa inaan wax ku biiriyo. Wadajir ahaan, waxaan sii wadi doonnaa dhiirrigelinta warshad ka sii waarta oo loo dhan yahay sidii shalay ahayd, annagoo xusuusinayna warshadaha dariska ah iyo dowladaha caalamiga ah in socdaalku uu lama huraan u yahay nolosha. ”
Golaha Socdaalka & Dalxiiska Adduunka wuxuu matalaa waaxda gaarka loo leeyahay ee Safarka & Dalxiiska. Xubnaha waxaa ka mid ah 200 oo agaasimeyaal guud, Kuraasyo iyo Madaxweynayaal shirkado socdaal & dalxiis oo hormuud u ah adduunka oo ka kala yimid dhammaan juqraafiyeedyada dhammaan warshadaha. In ka badan 30 sano, WTTC waxaa ka go'an inay sare u qaaddo wacyiga dowladaha iyo dadweynaha ee ahmiyadda dhaqaale iyo bulsho ee waaxda Socdaalka & Dalxiiska.
Julia Simpson, Madaxweynaha & Maamulaha WTTC ayaa yiri:
“Waan ku faraxsanahay inaan ku soo dhoweeyo Adam Guddiga Fulinta ee WTTC. Aadam wuxuu la imanayaa khibrad aad u badan isagoo si dhow ula shaqeeyay aabbihii dhintay si uu u dhiso waxa hadda jira, oo ah mid ka mid ah sumcadaha ugu caansan warshadahayaga. Aniga naftayda iyo dhammaan qoyska WTTC waxaan rajeyneynaa inaan la shaqeyno Adam doorkiisa cusub. ”
Adam iyo aabihiis “Butch” Stewart
Aragtida asalka ah ee xubnaha aasaasay goluhu wali waa isku mid: dawladuhu waa inay aqoonsadaan safarka iyo dalxiiska inay yihiin mudnaanta koowaad, ganacsigu waa inuu isku dheellitiraa dhaqaalaha dadka, dhaqanka, iyo deegaanka, iyo raadinta wadaagga ah ee kobaca muddada-dheer. Xubinnimada waxaa ka mid ah baaxadda warshadaha, laga bilaabo shirkadaha diyaaradaha ilaa hawlwadeennada dalxiiska ilaa kooxaha martigelinta. Golaha Fulintu wuxuu ka kooban yahay Guddoomiyeyaal, Madaxweynayaal, iyo Madax -fuliyayaal ka kala socda qaybaha socdaalka iyo dalxiiska adduunka.
Urur iskaa wax u qabso ah, hoggaanka WTTC ayaa tusaalaha u ah, isagoo bixinaya waqtigooda iyo kheyraadkooda qaaliga ah si horay loogu sii dhaqaajiyo howlaha caalamiga ah ee dunidan is-beddesha. Hoggaamiyeyaasha warshadaha ayaa lagu casuumay inay ku biiraan Guddiga Fulinta oo u taagan sidii wax -ka -beddellada aasaasiga ah iyo wacyi -gelinta, kor u qaadista safarka nabdoon iyo kobcinta ee sannadaha soo socda.
Sandals® Resorts waxay siisaa laba qof jacaylka ugu jaceylka badan, Khibrad raaxo leh oo ku jirta Kariibiyaanka dhammaan 16 -ka goobood ee xeebta quruxda badan leh ee Jamaica, Antigua, Saint Lucia, The Bahamas, Barbados, Grenada, iyo Curacao furitaanka Abriil 2022. Dabaaldegga 40 sannado, shirkadda ugu weyn ee loo dhan yahay ee loo dalxiis tago waxay bixisaa ka-qaybgalyo tayo leh oo ka badan kuwa kale ee meeraha. Goobaha Sandals -ka gaarka ah waxaa ku jira saxeexa Love Nest Butler Suites® ugu dambayn asturnaanta iyo adeegga; butlers oo ay tababartay Guild of Professional English Butlers; Red Lane Spa®; 5-Star Global Gourmet ™ cunno, hubinta khamriga khaanadaha sare, khamriga qaaliga ah, iyo maqaayadaha qaaska ah ee cuntada leh; Xarumaha Aqua oo leh aqoonsi iyo tababar PADI® oo khabiir ah; Wi-Fi dhakhso leh xeebta ilaa qolka jiifka iyo Sandals Aroosyada La-habeyn karo. Resorts Sandals waxay u dammaanad qaadaysaa martida nabada maskaxda laga bilaabo imaanshaha ilaa bixitaanka Borotokoollada Platinum Sandals ee Nadaafadda, tallaabooyinka caafimaad iyo badbaado ee shirkadda ee loogu talagalay inay martida siiso kalsooni aad u badan marka ay ku safrayaan Kariibiyaanka iyo sidoo kale Hubinta Fasaxa Sandals-ka cusub, oo ah barnaamij ilaalin fasax oo dhammaystiran oo ay ka muuqato dammaanad-warshadeed oo ugu horreysa fasax beddel bilaash ah oo ay ku jirto duulimaadkii martida saamaysay by joojinta safarka ee la xidhiidha COVID-19. Sandals Resorts waa qayb ka mid ah Sandals Resorts International (SRI) oo qoysku leeyahay, oo uu aasaasay Gordon “Butch” Stewart, oo ay ku jiraan Goobaha Xeebaha ee ku wajahan qoyska. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan kala duwanaanshaha Sandals Resorts Luxury Include®, booqo sandals.com.